BKF Fitaovana fanamboarana. BKF Rindrambaiko fanarenana.
Nahoana DataNumen BKF Repair?
Ny tahan'ny fanarenana dia ny most mason-tsivana lehibe a BKF vokatra fanarenana. Miorina amin'ny fitsapana feno nataonay, DataNumen BKF Repair manana ny tahan'ny fanarenana tsara indrindra, mitovy amin'ny Recovery for Backup, ary tsara kokoa noho ireo mpifaninana rehetra eny an-tsena! Toy ny vidin'ny DataNumen BKF Repair dia mora lavitra lavitra noho ny an'ny Recovery for Backup, ny vokatray DataNumen BKF Repair manana ny tahan'ny vidiny / fampisehoana tsara indrindra.
Mianara bebe kokoa momba ny fomba DataNumen BKF Repair mifoka ny fifaninanana
Cable Laboratoara Teknolojia
New Brunswick, NJ, Etazonia
Endri-javatra lehibe ao DataNumen BKF Repair v2.9
Fanohanana amin'ny fanamboarana BKF fisie noforonina niaraka tamin'ny Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP ary ny server 2003 backup backup.
Fanohanana amin'ny fanamboarana BKF fisie noforonina miaraka amin'ny kinova Veritas Backup Exec rehetra, ambanin'ny Windows NT, Windows Server, Netware, OS / 2 na Macintosh.
Tohano hamerenana ny angona, habetsahana, firafitra fampirimana ary fisie ao BKF tahiry.
Fanohanana mba hahazoana sitrana BKF tahiry.
Fanohanana amin'ny fanamboarana BKF fisie amin'ny media maloto, toy ny floppy disk, Zip kapila, CDROM, sns.
Fanohanana hanamboarana andiany iray BKF raki-daza.
Manohana ny famerenana amin'ny laoniny ny multi-dataset sy ny multi-volume BKF tahiry.
Fanohanana amin'ny fanamboarana BKF fisie habe 16777216 TB (ie 17179869184 GB).
Tsy misy tombontsoan'ny mpitantana ilaina hamerenana amin'ny laoniny BKF raki-daza.
Tohano hahitana sy hisafidy ny BKF rakitra tokony hamboarina amin'ny solosaina eo an-toerana.
Tohano ny fidirana amin'ny Windows Explorer, amin'izay ianao afaka manamboatra a BKF manaova rakitra miaraka amin'ny menio misy ny Windows Explorer.
mampiasa DataNumen BKF Repair hamerina ny kolikoly BKF Files
Raha ny anao BKF ny rakitra dia simba na simba noho ny antony maro samihafa ary tsy azonao averina amin'ny laoniny tsara, azonao ampiasaina DataNumen BKF Repair hijerena ny BKF manaova rakitra ary alao angona betsaka araka izay azo atao avy amin'izy ireo.
Fanamarihana: Alohan'ny hamerenana izay simba na simba BKF rakitra amin'ny DataNumen BKF Repair, azafady hakatony ny Microsoft Backup Utility sy ireo rindranasa hafa mety manova ny BKF hametraka.
Safidio ny simba na simba BKF fisie hamboarina:
Azonao atao ny mampiditra ny BKF anaran'ny rakitra mivantana na kitiho ny bokotra hijerena sy hisafidianana ilay rakitra.
Default (nitranga in- DataNumen BKF Repair dia hamerina ireo entana ao amin'ny BKF rakitra ary tahirizo ao anaty lahatahiry xxxx_recovered, izay xxxx no loharano BKF anaran'ny fisie. Ohatra, ho an'ny MyBackup fisie.bkf , ny lahatahiry output default dia ho MyBackup_recovered. Raha te hampiasa anarana hafa ianao dia azafady mifidy na apetraho mifanaraka amin'izany:
Tsindrio ny bokotra, ary DataNumen BKF Repair start scanning sy fanamboarana ny loharano BKF rakitra. Bara fandrosoana
Aorian'ny fizotry ny fanamboarana, raha ny loharano BKF Azo amboarina soa aman-tsara ny fisie, ho hitanao boaty hafatra toy izao:
Azonao atao izao ny manokatra ny lahatahiry MyBackup_recovered misy ireo entana namboarina rehetra ao amin'ny BKF hametraka.
DataNumen BKF Repair 2.9 dia navoaka tamin'ny 18 Desambra 2020
DataNumen BKF Repair Navoaka tamin'ny 2.7 Novambra 4 ny 2020
DataNumen BKF Repair Navoaka tamin'ny 2.6 Novambra 18 ny 2019
DataNumen BKF Repair 2.5 dia navoaka tamin'ny 16 Mey 2019
Fanohanana mba hahazoana sitrana BKF raki-daza.
DataNumen BKF Repair 2.2 dia navoaka tamin'ny 17 Aogositra 2013
Hatsarao ny mifanentana amin'ny rafitra fiasa vaovao Windows 7 sy 8.
DataNumen BKF Repair 2.1 dia navoaka tamin'ny 1 Desambra 2010
Hatsarao ny fampiasana GUI.
DataNumen BKF Repair 2.0 dia navoaka tamin'ny 2 aprily 2009
Soraty indray ny fampiharana sy ny motera fanamboarana.
Amboary ny bibikely amin'ny fikirakirana ny anaran'ny fisie.
DataNumen BKF Repair Navoaka tamin'ny 1.2 Jolay 5 ny 2006
Hatsarao ny motera fanarenana.
DataNumen BKF Repair 1.0 dia navoaka tamin'ny 16 Jona 2005
Fitaovana matanjaka hamerenana amin'ny laoniny ny backup Microsoft (BKF) fisie.